Mixer okugeza eyakhelwe: incazelo, izinhlobo, ukufakwa izici
amapayipi Modern libhekene-design ekhangayo, futhi okubaluleke - akuthathi isikhala kakhulu, ukuvumela ukuma yayo kule lavatories kanye zokugezela banoma iyiphi isayizi. Uma ngaphambili mixer imigqa zazibonakala, namuhla ke kungenziwa agibele amahhashi ngendlela efihliwe. labathaki bamafutha esakhelwe ngaphakathi ngoba ngigeza futhi okugeza - is ergonomically yakhelwe idivayisi ubhekana imisebenzi yayo, kodwa ngesikhathi esifanayo cishe ezingabonakali.
A mixer esakhelwe, ngokuvamile siqukethe ezimbili izakhi eziyinhloko: isisekelo iyunithi aboshelwe iphaneli odongeni kanye iziyisikhombisa control. Ingxenye ngayinye angathengwa ngokwehlukana, ukuvumela ukuba ukhethe Umklamo iphaneli umhlobiso ngokwemibiko yokugezela ingaphakathi.
Okuthakazelisayo enkulu ngaso sonke isikhathi iyunithi eyinhloko mixer. Kwaba sibonga kuye ukuthi kukhona umfudlana tekuphatfwa kwemanti. Ezimweni eziningi block umelwe ngesimo a isilinda plastic futhi yafakwa threaded zethusi ikhanda nge izimbobo ezine. Ukuze element ngayinye libhekene injongo yawo:
Ukwamukelwa kokuphuza kungaba hlambi amanzi.
Okuphakelayo ukuze itjhubhu we mixer uketshezi okuxubile.
Cabanga izinzuzo main ukuthi labathaki bamafutha afakwa udonga.
Ngokwemvelo, ngenxa amancane kangako kule divayisi kuyoba eliwedlula nokugeza. Futhi okubaluleke - ukungabakhathaleli nhlobo izingxenye ophumile. Mixer eyakhelwe kuthatha isikhala okuncane, futhi iphaneli flat nge isigwedlo noma ukulawula valve ushiye isikhala okugeza izisekeli noma trifles encane yasendlini.
Ngokukhethekile ikhokhelwa ukuze abakhiqizi luyimfanelo siyiqiniso odongeni nokufakwa. Futhi akumangalisi, ngoba ukufakwa imishini wenziwa ukwakhiwa kodonga ne silulindele iminyaka eminingi, kanjalo liphelelise lo ukulungiswa muva nje ikwenze. Phela, kusho ukwehluleka esephule ubuqotho enamathela.
labathaki bamafutha esakhelwe ngaphakathi ujike ukwelashwa amanzi e isifundo emnandi futhi lula umphefumulo. Ngeke uphinde wesabe ukuze ujike ahluleke aphule ingxenye ophumile ngigeza, noma okubi nakakhulu, uzolimala. Kulokhu, kuphela ezimbalwa Ukujikeleza elula noma ngokucindezela - namanzi ukugeleza ngeke kushintshwe ohlangothini oyifunayo.
Kuwubuwula ongaphika ukuthi mixer esakhelwe ubukeka stylish kakhulu. Banganhlanhlatsi isakhiwo lapho azikho izingxenye extra, ukuhlobisa yokugezela ukufaka efana design. Ukusebenzisa leli thuluzi - nemnandi.
Uma uzama ukusungula kudingekile lokushisa umbuso ngesikhathi esisichitha 5 amalitha uketshezi, futhi 7 imizuzwana isikhathi. Le nkinga sibi kakhulu amafulethi anemisila amamitha. Lesi simo kuyokusiza ukuba ulungise ukufakwa ukucasha-thermostat mixer.
Kwezinye izimo, kuphela mixer yalolu hlobo ezingase zifaneleke, kubalulekile ukukhumbula. Ngokwesibonelo, isidingo umsebenzi "eshaweni imvula", okusho ubufakazi bokuba khona kwalesi imishini.
semnyango isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu
Esakhelwe ngaphakathi eshaweni labathaki bamafutha ikhipha ezahlukene kusukela kumadivayisi bendabuko futhi efakwe ikakhulukazi apholile.
Kulesi imodeli singanikezwanga itjhubhu ukuthi isimiso kunengqondo - ke akudingeki ibhokisi eshaweni, eshaweni ikhanda kungaba okwanele nge hose. Ngenxa yalokho, mixer yalolu hlobo ifakwe eyodwa port itheku (okuyinto ixhunywe hose eshaweni) kanye Imiphumela ezimbili (lapho amanzi wenziwa, ashisayo nabandayo).
Kukhona futhi labathaki bamafutha esakhelwe hlambi yokuhlanzeka uhlobo, efakwe elilandelayo ethoyilethi, bangakwazi esikhundleni ngokuphelele bidet. Ngokuvamile, lenqwaba sihlinzekela mixer ukufakwa ukucasha futhi isandla eshaweni nge hose, okuyinto ukufakwa ukwakhiwa udonga. Kulezi onobuhle futhi inikeza itjhubhu.
Esakhelwe ngaphakathi okugeza mixer kufaka engavamile kulungiselelwa ukhetho - ukufakwa kwalo wenziwa ngqo usebe okugeza, endaweni engcono kakhulu, futhi lokhu kuba inzuzo yayo elingenakuphikwa. Ngaphezu kwalokho, kule imodeli libhekene eziningi eziwusizo:
Kungenzeka ukufihla ngale kwesiyingi okugeza eshaweni ikhanda hose futhi ukuyikhipha kungenziwa njengoba kudingeka.
It ekhulula isikhala odongeni, angasetshenziswa ukufaka emashalofini esitolo zokugeza.
Kakhulu ziyancipha okugeza usethe isikhathi, ngenxa yokuthi idivayisi inikeza elikhulu alondoloze nemithombo yamanzi imodi.
Uxhumano okugeza mixer kungaba izinhlobo ezimbili ezingafani ngendlela kokuthenga. Isisetshenziswa ukufakwa sangaphandle block Monolithic, okuyinto zigxilé emaphethelweni okugeza. Kulokhu, amanzi ukuxuba iyunithi kufihliwe ngezansi usebe okugeza. amadivaysi Flush-agibele amahhashi uvumele ebusweni ukushiya kuphela itjhubhu futhi control panel, bonke abanye kufihliwe ngaphansi okugeza.
Ngosizo lwezobuchwepheshe banamuhla zokukhiqiza labathaki bamafutha ukufakwa ezifihlakele kungenziwa ifakwe ezihlukahlukene izici ezihlakaniphile ukuthi ulethe induduzo eyengeziwe ekuphileni kwethu.
Enye yalezi emisha kulokho kuyadingeka ukuze ayeke kabanzi, thermostat futhi othomathikhi control lokushisa. Lo msuka evumela ukuba kulondolozwe izinga lokushisa kusengaphambili amanzi Imodi njalo.
Ngemuva kokuqala automatic alondoloze nemithombo yamanzi lokushisa ukulungiswa, okuyinto ethatha nje ngesekhondi.
Kwezinye onobuhle, udonga nokufakwa ithuba ukuxhuma thermostat, okuyinto angathengwa ngokwehlukana.
Ukuze ufake nokufakwa udonga yokugezela, udinga ukwakha sekhefu odongeni. Ngokuvamile, ubukhulu bayo kuyinto 120-150 mm kanti ukujula - 85-110 mm. Ngenxa yalezi zinjongo Punch elekhanda ukhonkolo.
Grooves for amapayipi kwenziwa. Kodwa ngaphambi kokuba lokho, kufanele ukhethe indawo ukufakwa itjhubhu futhi ukuthambisa. Grooves abekwa phezu amaphuzu ehlosiwe unit eyinhloko mixer. Okubalulekile, amashubhu lokhu ukwakhiwa lapho amanzi isuswe, akumele ziphazamise amaphayiphi amanzi.
Stroebe futhi kudingekile ukuba abeke iphayiphi lapho amanzi yanikezwa mixer, kufanele uqale zingene phansi. Kodwa uma uhlela sheathe izindonga plasterboard, akukho isidingo shtrobirovanii.
Lalihlehliswa okugeza mixer ixhunywe ipayipi fixed, njengoba uxhumano-plug-in - izakhi okuthembekile. Ngenxa yokuthi le ukuxhumana yangaphakathi kanye unit central ogibele odongeni, ukufakwa izidingo okusezingeni eliphezulu. Konke ukuxhumeka kumele kube njengoba okunokwethenjelwa.
Ukuze mixer eyakhelwe wakhonza isikhathi eside ngangokunokwenzeka ngesikhathi ukusebenza azange abe ezibangela ukubhalelwa kuziphendulela ngefanelo, ukunakekelwa okukhethekile Kunconywa ukukhokhela amapayipi impahla, zazo ogibele ogangeni. It is hhayi Kunconywa ukusebenzisa metal amapayipi, njengoba asetshenziswe uxhumano threaded bese ucindezela nokufakwa. Kunconywa ukuba makudle polypropylene nethusi imikhiqizo. Ngokwemvelo, ukufakwa yabo elinesimo eyinkimbinkimbi ezithile, kodwa ngenxa ukwakhiwa kuyoba eziqinile.
Imakethe ngokwesiko kubhekwe ukuba plumber ezihamba phambili kusukela abakhiqizi European bayajabula futhi labathaki bamafutha ezishaywayo-agibele amahhashi:
Ukwanda udumo iwine imishini sanitary ekhiqizwa e-Italy: Jacuzzi, Albatros, Teuco.
Got idumela elihle German labathaki bamafutha eyakhelwe: Hansa, Ideai Standart, Grohe, Kludi, Hoesch, Duravit.
Amadivayisi kufihlwe ukufakwa quality enhle ikhiqizwa yi-France, Denmark kanye Finland: UJakobe Delafon, Damixa, Oras.
Ukumelana thermometer: Incazelo partings nesiphambeko
I lordosis lumbar
I-Herpes uhlobo 6 - ukuthi lokhu igciwane nokuthi indlela yokuphatha kulo?
I esipelingi izifushaniso